Home » Lahatsoratra farany farany » fanabeazana » Private Resort dia manome $ 2 tapitrisa any Karaiba sy Azia
Vaovao Mafana Anguilla • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Vaovao Mafana Repoblika Dominikana • fanabeazana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Resorts • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Sri Lanka • Vaovao Mafana Thailand • Tourism
Fanomezana Resort manokana
Amin'ny fotoana toa toa vaovao momba ny fahafatesan'olona, ​​fampihorohoroana, fihetsiketsehana ary heloka bevava fotsiny no henontsika isan'andro, dia tsara ny mandre zavatra mandeha amin'izao tontolo izao. Toy ny dolara an-tapitrisany omena an'ireo vondrom-piarahamonina hanohanana ny fanabeazana. Ary ao anatin'io zotran-kevitra io dia nanambara ny ÀNI Private Resorts fa nanolotra $ 2 tapitrisa ho an'ny fotodrafitrasa sy solosaina ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana isaky ny firenena misy ny fananany.
Ny firenena tsirairay avy dia hahazo fanomezana $ 500,000 izay vatsian'ny ÀNI Private Resorts, ary ny Tim Reynolds Foundation.
Ny hetsika dia ny fanitarana ny fanabeazana amin'ny siansa informatika sy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa fanabeazana, toy ny fanatsarana ny tranomboky, sy ny efitrano fianarana any amin'ny firenena misy ÀNI Private Resorts.
Manamafy ny fanoloran-tenan'ilay orinasa hanampy amin'ny fanabeazana sy hanohana ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana izany.
Fanamboarana hamolavolana laboratoara vaovao misy azy roa Anguilla ary i Sri Lanka dia hanomboka amin'ny faran'ity taona ity, arahin'ny sekoly fanabeazana fototra vaovao ao an-tanànan'i Rio San Juan. ÀNI Private Resorts dia mifandray amin'ireo mpanabe Thai amin'izao fotoana izao hamaritana hoe aiza no hahasoa indrindra ny $ 500,000. Tim Reynolds sy ÀNI dia faly fa afaka manome trano sy trano maoderina nohavaozina ho an'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana mba hahasoa azy ireo ankehitriny sy ho an'ny taranaka ho avy.
Tim Reynolds, mpanorina / tompon'ny ÀNI Private Resorts, dia mpanao asa soa izay manana fanoloran-tena matanjaka amin'ny fanatsarana ny sehatry ny zavakanto sy ny fanabeazana manerantany. Izy koa dia nanao anjara biriky lehibe tamin'ny fikarohana sy toeram-pitsaboana - izy tenany izay tafavoaka tamin'ny ratra nahazo ny hazondamosina. Nanomboka ny tombom-barotra feno i Tim AcademNI Art Academies any Thailand, Anguilla, Sri Lanka, Etazonia, ary ny Repoblika Dominikanina hanampiana ireo mpanakanto maniry hanatratra ny nofinofin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fandaharam-pianarana sary sy sary hosodoko malalaka sy feno. Miaraka amin'ny fandaharam-pampianarana, manampy ireo mpianatra hivarotra sy hivarotra ny sanganasan'izy ireo eran'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny fampirantiana galeriana ary amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny tranokalan'ny hotely: ÀNI Art Gallery. Ny 100% -n'ny vola azo amin'ny fivarotana ny kanto rehetra dia mandeha mivantana amin'ireo mpanakanto.
Reynolds dia mampiseho am-pireharehana ny kanto avy amin'ireo mpianatra ao amin'ny toeram-pialan-tsasatra misy azy ireo ary ny vahiny dia afaka mividy zavakanto tany am-boalohany ho fahatsiarovana ny fijanonany any amin'ny oniversite eo an-toerana.
“Ny fisafidianana sy ny kalitaon'ny zavakanto avy amin'ny mpianatra amin'ny enina amin'ny ÀNI Art Academy dia miavaka. Hanohy hamoaka diplaoma amin'ny kanto amin'ny alàlan'ny Akademia mandritra ny am-polony taona maro izahay ary faly amin'ny fotodrafitrasa vaovao naorina hanitarana ny fandraisana andraikitra fanabeazana eo amin'ny fiarahamonina eo an-toerana, "hoy i Reynolds.
"Vonona ny hampisondrotra ireo vondrom-piarahamonina zarainay amin'ny mponina ao an-toerana i ÀNI ary amin'ny alàlan'ny fandefasana solosaina sy fampiroboroboana ny sehatry ny siansa informatika, dia hanana fahaizana mianatra sy mivelona tsara ny mpianatra nefa tsy mila miala amin'ny vondrom-piarahamonin'izy ireo," hoy i Tim Reynolds namarana.